Midowga Yurub oo €100 milyan Euro ah ku kaalmeynayo miisaaniyadda dowladda. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Midowga Yurub oo €100 milyan Euro ah ku kaalmeynayo...
Midowga Yurub oo €100 milyan Euro ah ku kaalmeynayo miisaaniyadda dowladda.
Muqdisho(SNTV):— Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xassan Cali Kheyre, oo ka warbixiyay safarkii Brussels iyo natiiijooyinkii kasoo baxay kulamadii uu la qaatay madaxdii kala duwaneyd iyo shirkii looga hadlayay amniga dalka. Waxuuna sheegay in ay wada galeen dhowr heshiis oo muhiim u ah dawladda Soomaaliya iyo Midawga Yurub.
Previous articleGuddiga joogtada ah Golaha Aqalka sare oo ka hadlay arrimo muhiim ah
Next articleDawladda Soomaaliya oo $500,000 oo dheeraad ah ku bixineysa gurmadka fatahaadaha